Jikelele uMatthew Ridgway - WWII kunye neMfazwe yaseKorea
UMatthew Bunker Ridgway wazalwa ngoMatshi 3, 1895, e-Fort Monroe, VA. Unyana kaKolonel Ridgeway noRuth Bunker Ridgway, wakhuliswa kwiindawo ezikulo lonke elaseMelika kwaye waqhayisa ngokuba "ngumkhosi wezempi." Ukugqweswa kwiSikolweni esiphakeme saseNgesi eBoston, MA ngo-1912, wagqiba ekubeni alandele ezinyathelweni zikayise aze afake isicelo sokwamkela kwiWest Point. Ukuhluleka kweemathematika, wahluleka kwimizamo yakhe yokuqala, kodwa emva kokufunda ngokubanzi kweso sifundo esangena kulo nyaka olandelayo.
Ukukhonza njengomphathi wegraduate weqela lebhola ekolweni, wayefunda nabo kunye noMark Clark kunye neminyaka emibini emva kukaDwight D. Eisenhower no- Omar Bradley . Ukugqiba izifundo zabo ngo-1917, iklasi likaRidgway eligqitywe ekuqaleni ngenxa ye-US ukungena kwiMfazwe Yehlabathi I. Kamva ngaloo nyaka, watshata noJulia Caroline Blount kunye neentombi ezimbini.
Wathunywe ummeli wesibini, u-Ridgway wabuyela ngokukhawuleza waya kwi-lieutenant yokuqala waza wanikwa isikhundla somphathi wexeshana ngenxa yokuba i-US Army yanda ngenxa yemfazwe. Kuthunyelwe kwi-Eagle Pass, TX, wachaza ngokufutshane inkampani yenkwenkwezi kwiGoli ye-Infantry yesithathu ngaphambi kokubuyiswa eWest Point ngo-1918 ukufundisa iSpanishi nokulawula inkqubo yezemidlalo. Ngelo xesha, i-Ridgway yacaphukisa isabelo njengoko wayekholelwa ukuba ukulwa ngemfazwe ngexesha lemfazwe kuya kubaluleka ekuqhubekeni kwexesha elizayo kwaye "ijoni elingazange libe negalelo kule ntshukumo enkulu yokugqibela yobubi ngaphezu kobubi yayiya kubonakaliswa." Kwiminyaka emva kwemfazwe, iDridgway idlulile kwizabelo zexesha loxolo kwaye yakhethwa kwiSikolo soMntwana wase-Infantry ngo-1924.
Ukugqiba ikhosi yokufundisa, wathunyelwa eTientsin, eChina ukuyalela inkampani yeGesi ye-Infantry ye-15. Ngomnyaka we-1927, wabuzwa nguMongameli Jikelele uFrank Ross McCoy ukuba athathe inxaxheba kwimishini eNicaragua ngenxa yezakhono zakhe ngesiSpanish. Nangona iRiggway inethemba lokufumana ipentathlon kwiqela le-Olimpiki yase-United States ye-1928, yaqonda ukuba isabelo sinokunyusa phambili umsebenzi wakhe.
Ukwamkela, wahamba waya ngasemzantsi apho wayesekela ekujongeni ukhetho lwamahhala. Kwiminyaka emithathu kamva, wabelwa njengomcebisi wempi kwiRhuluneli-Jikelele yasePhilippines, uTheodore Roosevelt, Jr. Ukubamba isikhundla esona sikhulu, impumelelo yakhe kule post yabangela ukuba kuqeshwe kwi-Command and General Staff School e-Fort Leavenworth . Oku kwalandelwa yiminyaka emibini kwiKholeji ye-Army War.
IMfazwe Yehlabathi II iqala:
Ukugqiba iziqu ngo-1937, iRiggway yabona inkonzo njengomphathi wongameli oyintloko kwi-Second Army kwaye kamva uncedisayo oyintloko wabaqeshwa beSine Army. Ukusebenza kwakhe kule mi sebenzi kubanjwe isohlo likaGeorge Marshall owayemthumelele kwiSicwangciso seMfazwe ngoSeptemba 1939. Ngomnyaka olandelayo, u-Ridgway wathola ukuphakanyiswa ku-lieutenant colonel. Xa i-US ingena kwiMfazwe Yehlabathi II ngoDisemba 1941, iRiggway yayiphumelele-elandelwa kumyalelo ophezulu. Ukukhuthazwa ku-brigadier jikelele ngoJanuwari 1942, wenziwa ngumlawuli wecandelo lohlulo lweCandelo le-82 leNcinci. Kulo thuba ngehlobo, i-Ridgway iphinde iphromotha kwaye inikwe umyalelo wecandelo emva koBradley, ngoku ngokuqhelekileyo jikelele, wathunyelwa kwiCandelo le-Infantry lama-28.
Ngoku i-general general, i-Ridgway ijongene nokuguquka kwengu-82 kwisigaba se-US Army sokuqala esahlukileyo kwaye ngomhla we-Agasti 15 saqeshwe ngokusemthethweni i-82 ye-Airborne Division.
Ukuqeqesha ngamandla amadoda akhe, iRiggway yaphayona ubuchule bokuqeqeshwa kwamanzi kwaye yabizwa ngokuba yenze idilesi ibe yimpembelelo efanelekileyo yokulwa. Nangona ekuqaleni wayekhathazekile ngamadoda akhe ukuba abe "umlenze" (ongeyena moya oqeqeshiwe), ekugqibeleni wathola amaphiko akhe aphikisayo. Eyalwe eMntla Afrika, i-82 ye-Airborne yaqalisa uqeqesho lokuhlasela kweSicily . Emva kokuba ebambe indima ephambili ekucwangciseni ukuhlasela, iRiggway yaholela ekubambeni kwinqanaba ngoJulayi 1943. Ekhokelwa nguGoli uJames M. Gavin we-505th yeParachute Infantry Regiment, i-82 eqhubekayo ilahlekelwa kakhulu ngenxa yemicimbi engaphandle kwe-Ridgway.
I-Italy & D-Day:
Ekuvukeni kokusebenza kweSicily, kwenziwa izicwangciso zokuba i-82nd Airborne ithathe indima ekuhlaselweni kwe-Italy . Ukusebenza okulandelelanayo kwaholela ekutshitshweni kwamabutho amabini ahlaselwa ngomoya kwaye kunokuba imikhosi yaseRiggway iwele kwi-beach yaseSalerno njengama-reinforcements.
Ukudlala indima ebalulekileyo, bancedisa ekubambe intloko yaselwandle kwaye bathatha inxaxheba kwimisebenzi ecaphukisayo kuquka ukuphula kwi-Volturno Line. NgoNovemba 1943, iRiggway kunye neminyaka engama-82 yabuya eMeditera kwaye yathunyelwa eBrithani ukulungiselela iD-Day . Emva kweenyanga ezimbalwa zokuqeqesha, i-82 yaba enye yezohlulo ezintathu ze-Allied airborne, kunye ne-US 101st Airborne kunye ne-British 6th Airborne, ukuza eNormland ngobusuku kaJuni 6, 1944. Ukuhlamba ngokuhlukana, iRiggway yaqhuba ngokulawula ngqo madoda akhe ..
Ukuxhasana namadoda akhe, awayehlakazekile ngexesha lokuhla, iRiggway yahokela ulwahlulo njengoko luhlasela iinjongo ezisentshonalanga ye-Utah Beach. Ukulwa kwi-bocage (hedgerow) yelizwe elilukhuni, isahlulo esiphambili siye eCherbourg kwiiveki emva kokufika. Ukulandela umkhankaso waseNormandy, iRiggway yamiselwa ukukhokela i-XVIII Airborne Corps entsha eyayiquka i-17, 82, ne-101 yama-Airborne Divisions. Umyalelo we-82 wada waya eGavin. Kulo nxaxheba, wayejongene nezenzo ezingama-82 no-101 ngexesha lokuthatha inxaxheba kwi- Operation Market-Garden ngoSeptemba 1944. Amagosa ase XVIII Corps kamva adlala indima ebalulekileyo ekubuyiseleni amaJamani ngexesha leMfazwe yeBulge ngoDisemba.
Izenzo zokugqibela zeViggway zeMfazwe Yehlabathi II zafika ngo-Matshi 1945, xa wayekhokelela kwimikhosi ye- Operation Varsity . Oku kwambona ebengamela i-British 6th Airborne kunye ne-US 17th Airborne Division njengoko behla ukuze bafumane ukuwela ngaphaya koMlambo iRhin.
Ngexa lo msebenzi wawuphumelele, iRiggway yalimala ehlombe ngamagqabi aseJamani. Ngokukhawuleza, u-Ridgway waqhubeka nokuyalela umzimba wakhe njengoko wawuqhubela eJamani ngeeveki zokugqibela zokulwa eYurophu. NgoJuni 1945, waphakanyiswa ukuba ngu-lieutenant general kwaye wathumela ePacific ukuba akhonze phantsi kweGeneral Douglas MacArthur . Ukufika njengoko imfazwe neJapane yayiphelile, wawajonga ngokufutshane i-Allied forces eLocon ngaphambi kokuba abuyele entshonalanga ukuba ayolela amabutho ase-US eMeditera. Kwiminyaka emva kweMfazwe Yehlabathi II, iDridgway idlulile kwimithetho emininzi yexesha loxolo.
ISekela leNtloko yeBasebenzi ngo-1949, i-Ridgway yayisesikweni xa iMfazwe yaseKorea yaqala ngoJuni 1950. Eyaziwayo malunga nokusebenza eKorea, yalelwa apho ngoDisemba 1950 ukuba ithathe indawo yowokugqibela owabulawa uGeneral Walton Walker njengomlawuli we-Eighth Army . Ukudibanisana noMacArthur, owayengumbutho ophakamileyo weZizwe eziManyeneyo, u-Ridgway wanikezwa ilungelo lokusebenzisa i-Army Eight njengokuba ebona kufanelekile. Ukufika eKorea, iRiggway ifumene i-Eighth Army ngokuphindaphindiweyo ngokubhekiselele ekuhlaselweni okukhulu kweTshayina. Umkhokeli onobudlova, uRowgway waqalisa ukusebenza ngokukhawuleza ukubuyisela umoya wakhe wokulwa.
Ukususa amanqwanqwa kunye neengqondo ezikhuselayo, i-Ridgway izikhululo ezivuzekileyo kwaye zenza imisebenzi ekhuseleyo xa zikwazi. Ukunciphisa amaTshayina kwiimfazwe zaseCyyyong-ni naseWonju ngoFebruwari, i-Ridgway yenze iinyanga ezilandelayo zikhuphe kwaye zathatha iSeoul.
Ngo-Epreli ngo-1951, emva kokungqubuzana okukhulu, uMongameli uHarry S. Truman wanciphisa iMacArthur waza wamthabatha uRiggway. Ukukhuthazwa ngokubanzi, wayejongene nemikhosi ye-UN kwaye wakhonza njengegunyana lempi laseJapan. Ngomnyaka ozayo, iRiggway yancinciza i-North Korea kunye neTshayina ngenjongo yokuphinda ithathe yonke indawo yaseRiphablikhi yaseKorea. Wayejongene nokubuyiselwa kolawulo lwamaJapan kunye nokuzimela ngo-Apreli 28, 1952.
Ngomhla ka-Meyi 1952, uRiggway washiya eKorea ukuba aphumelele kwi-Eisenhower njengoMlawuli oPhezulu oPhezulu, iYurophu malunga noMbutho weNyano yase-North Atlantic (NATO). Ngethuba lokuhlala kwakhe, wenza inkqubela phambili ekwenzeni umbutho wenkqubela yemikhosi, nangona indlela yakhe engathandabuzekiyo ngezinye iinkqubo yabangela ubunzima bezopolitiko. Ukuze uphumelele eKorea naseYurophu, iDridgway yamiselwa uSihlalo weNgxowa-mali yase-US ngo-Agasti 17, 1953. Ngaloo nyaka, u-Eisenhower, owayengumongameli ngoku, wabuza uRockway ukuvavanywa kokungenelela kwe-US eVietnam. Ngokumelana nesenzo esinjalo, iRiggway yalungiselela ingxelo ebonisa ukuba amaninzi amakhulu amabutho aseMerika aya kufuneka ukuba aphumelele ukunqoba. Oku kubambisana no-Eisenhower ofuna ukuwandisa ukubandakanyeka kweMerika. Amadoda amabini alwa nocwangciso lwe-Eisenhower ukwenzela ukunciphisa ngobukhulu ubukhulu be-Army yase-US, kunye no-Ridgway ephikisanayo ukuba kwakuyimfuneko ukugcina amandla anele ukulwa nesongelo esakhulayo kwiSoviet Union.
Emva kweemfazwe ezininzi kunye no-Eisenhower, i-Ridgeway yashiya umhlala phantsi ngoJuni 30, 1955. Yasebenza ngokuthatha umhlalaphantsi, yayisebenza kwiibhodi ezininzi ezizimeleyo kunye neenkampani xa ziqhubeka nokukhuthaza umkhosi onamandla kwaye ziphepha ukuzibophezela okukhulu eVietnam. Ukuhlala ehleli kwimicimbi yezempi, u-Ridgway wafa ngoJulayi 26, 1993, wangcwatshwa e-Arlington National Cemetery. Umkhokheli onamandla, u-Omar Bradley, owayengumhlobo wakhe wangaphambili, wachaza ukusebenza kwe-Ridgway kunye ne-Eighth Army yaseKorea "yayiyinkunzi enkulu yobunkokheli bodwa kwimbali ye-Army."
I-PBS: I-General Ridgeway
I-Arlington National Cemetery: Matthew Ridgway
IYunivesithi yasePittsburgh: uMatewu B. Ridgway
Iincwadi kwiBasety in Preistist
Iiplanga ezi-5 ezidlulileyo zokubhukuda kwexesha elishumi elidlulileyo
Xa Uza kubona iDokotela kwiBursitis
Uguquka, Iintlanzi Ziva Intlungu
Iimpawu eziMathandathu ezitsha zeMat zehlabathi